मुख्यमन्त्रीको दास मनोबृत्ति
४१औं प्रधानमन्त्री र २ प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री, दुबैले नेपालको इज्जत मटियामेट पारेको अनुभूति गरियो । आफूलाई मोदीको रुपमा ढाल्ने लुगा लगाएर जनकपुर पुगेका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित पार्न सकेनन् । बरु मोदीले भाइसाप नै भनिदिए । कूटनीतिमा मोदी बडेभाइ बन्न सफल भए ।
दुईराष्ट्रवीच ठूलो सानो हुन्न, समानताको व्यवहार हुनुपर्छ । पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं ओलीले जनकपुरमै आफूलाई सानो छु भन्ने हीनतामा बाँधेको देखियो ।
त्यसपछि सुरु भएको नरेन्द्र मोदीको अभिनन्दनमा २ प्रदेशका मुख्य मन्त्री लालबहादुर राउतले नेपालको संविधानको धज्जी नै उडाइदिए । उनले मधेसमाथि बिभेद भइरहेको छ भनेर मोदीलाई गुहारे । जनकपुरबाट नेपालको भ्रमणको सुरुआत गरेकोमा खुशी हुनु, स्वागत गरिनु स्वभाविक हो तर स्वागतका नाममा दासता देखाउनु, आन्तरिक मामिलाबारे उजुरी गर्नु कूटनीतिक, राजनीतिक र राष्ट्रिय धर्म होइन । यी मुख्यमन्त्रीले त संविधानविरुद्ध संघर्ष जारी छ भनेर हात पो फैलाए ।
उर्दी लगाएर घरघरमा कलश राख्न लगाएका मुख्यमन्त्रीले जकपुरको सिंगार पनि तिरङ्गाको रंग प्रयोग गरेरगरेका थिए । १ सय २१ किलोको माला मोदीलाई पहिर्‍याइदिएपछि त्यही मालाको छायाँमा बस्न पनि यिनलाई लज्जाबोध भएन । मानौं यिनी मोदीका आज्ञाकारी पात्र हुन् ।
मोदी गए पछि प्रश्न उठेको छ, यिनले बोलेको भाषण परराष्ट्रको स्वीकृतिमा हो कि होइन, अव यिनका माँगहरुमा भारतले ध्यान दिने कि नेपाल सरकारले ? मोदीलाई पोल लगाएर यिनले गर्न खोजेको के हो ? देशघात भयो कि स्वाभिमान बच्यो ?
यिनले भनेकै हुन्– ‘हाम्रो संघर्ष आज पनि विभेदकारी संविधान र प्रादेशिक अधिकारका लागि जारी छ’ । आन्तरिक झगडा हुनसक्छ, हुन्छ । आन्तरिक मामिला विदेशीका सामु पोल लगाएर यिनले जुन नकाम गरेका छन्, त्यो आपत्तिजनक छ ।
समस्या नेपालभरि छ । कतै सानो होला, कतै ठूलो । मधेसमा भन्दा सुदूरपश्चिममा झन ठूला समस्या छन् । हिमालका आफ्नै समस्या छन् । मधेसमात्र होइन, सिंगो नेपाललाई कसरी समस्यामुक्त बनाउने सोच नेपालीको हो । मोदीले आएर नेपाल बनाइदिने अथवा मधेसको घाउमा मलम लगाइदिने होइन । होला, उनले दबाब दिए होलान्, अव ओलीले संंविधान संशोधन गर्न मान्लान् पनि । तर, अर्काको बलमा नाच्ने, रिमोटमा चल्ने व्यक्तिलाई विवेकशील मान्न सकिन्न ।
यिनैले पारीबाट ल्याएका मानिसलाई फ्रि मधेस, मधेस देशमा मोदीलाई स्वागत छ भन्ने व्यानर हल्लाउन लगाए । के गरेको यो ? प्रधानमन्त्री ओली, के हरेर बसेको, सुरक्षा निकायले तिनलाई यसो गर्ने छुट किन दियो ? हो, यिनको आर्तनाद सुनेर मोदीले १ अर्व ६० करोड यिनलाई दिएका छन् । के पैसाले मधेस देश बन्छ, विभेदकारी संविधान हो भने त्यो संशोधन हुन्छ ? बरु मधेसका आवाज संसदमा पुर्‍याएर राजनीतिक समाधान खोज्नु उपयुक्त होइन र ? ओलीजी, के भन्छन् ?